Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Bandhigyada TV-ga ee ay ugu jecel yihiin Brits ayaa hadda wax ku kordhinaya iscasilaadii weynaa
Cilmi-baaris cusub iyo ra'yi khabiir oo laga helay FutureLearn.com waxay iftiiminaysaa sida TV-ga iyo qul-qulatooyinka xiisaha leh ay u noqon karaan kuwo dhiirigelinaya Ingiriiska si ay u sameeyaan doorashooyin xirfadeed oo kala duwan iyo sida dhaqanka pop-ka uu si joogto ah u saameeyaan tacliinta, tababarka iyo shaqooyinka.
Qufulo badan iyo ka shaqeynta guriga ayaa keentay in dad badan oo Ingiriis ah ay helaan waqti dheeri ah oo ay ku mashquulaan bandhigyada TV-ga iyo hadda, cilmi baaris cusub oo laga sameeyay FutureLearn ayaa daaha ka qaadaysa sida ay qayb uga yihiin waxa ay dadku rabaan inay wax ka bartaan iyo jidadkooda shaqo ee suurtagalka ah iyo doorashadooda.
Iyada oo ku dhawaad ​​​​laba-meelood laba (39%) dadka Ingiriiska ay soo jiiteen Bridgerton-ku-qalanta suugaanteeda caadiga ah, Ciyaarta Squid ee xalinta mushkiladeeda xiisaha leh (33%) iyo Nolosha Kadib qaabkeeda murugada (40%), waxaa jiri kara waxbadan. danta ummadda iyo waxa ay ku wanagsan yihiin xirfadda. Barnaamijyada TV-ga ee qabsada Boqortooyada Midowday (UK) dhab ahaantii wax badan oo ku saabsan Ingiriiska ma ka sheegaan sidii ay moodayeen, tani ma noqon kartaa sababta iscasilaadii weyneyd sida aan hadda ognahay?
Sida Iscasilaada Wayn ay sii socoto qaniinyada oo Ingiriiskuna ay dareemayaan hubanti la'aan ku saabsan wadooyinkooda shaqo, cilmi baaris cusub oo laga helay goobta waxbarashada khadka tooska ah ee UK, FutureLearn.com, ayaa muujinaysa sida TV-gu u muujiyo sida aanu u jecelnahay, laga yaabo inay kaliya u noqoto jawaabta yoolalka shaqadeena.
Khabiir cilmi-nafsiyeedka waxbarashada, Dr Kairen Cullen, wuxuu sharxayaa sababta loogu soo jiiday qaybo ka mid ah bandhigyada TV-ga waxay muujin kartaa sida shakhsiyaadka ay ugu fiicnaan karaan waddooyinka xirfadaha qaarkood, caawinta dadka aan hubin halka ay bilaabayaan inay sameeyaan tallaabada ugu horreysa ee beddelka xirfadaha.
Bandhigyada sida Waxbarashada Galmada ayaa noqday kuwo caan ah iyadoo ay ugu wacan tahay habka ay u wajahaan mowduucyo ay ka mid yihiin galmada iyo jinsiga oo u fududeeya in laga hadlo sida ay qabaan 36% dadka Britain. Mawduucyada sidan oo kale ah ayaa sidoo kale laga helaa xirfadda daaweeyaha iyo sidoo kale koorsooyinka sida Xidhiidhka Caalamiga ah: Galmada, Awooda, Jinsiga iyo Socdaalka.
Marmar, saamaynta bandhigyada TV-ga aad jeceshahay way iska caddahay, sida lagu arkay shan meelood meel Ingiriisi kuwaas oo daawada Dilalka Eve sababtoo ah waxay ka dhigaysaa inay rabaan inay adduunka u safraan. Koorsada FutureLearn's Intro to Travel and Tourism,British waxay riyadaas ka dhigi karaan mid dhab ah.
Ku raaxaysiga adduunka khiyaaliga ah ee Game of Thrones lagu dejiyay (68%) waxay soo bandhigaysaa xirfado tacliimeed oo ka yar dhaqan ahaan sida wax soo saarka. Xiisaha ugu fiican ee xirfadda soo saarista filimada, taas oo keentay qaadashada Nalalka, Kamarada, Kombiyuutarka - Waxqabad! Sida Tignoolajiyada Dijital ah u Beddesho Filimada, TV-ga, iyo Ciyaartu waxay noqon kartaa tillaabada ugu horraysa ee loo guuro goobtaas.
Iyada oo ku dhawaad ​​27 milyan oo qoys oo UK ku nool ay heli karaan telefishin *** iyadoo aan la xusin tirada taleefannada gacanta iyo tablet-yada ee dadku hadda fursad u helaan inay daawataan bandhigyada TV-ga, waa caddahay saameynta barnaamijyada ay ku leeyihiin nolol maalmeedka. Laga soo bilaabo doorashooyinka moodada ilaa muusiga aan jecelnahay, waxaa jira wax qof walba leh, oo ay ku jiraan labada shanaad ee Brits ee daawada Doctor Who si ay u sahamiyaan meel bannaan oo sidaas darteed waxay u badan tahay inay helaan xirfad Astrobiology oo buuxinaysa qaadashada koorsada Nolosha Mars.
Astrid deRidder, Agaasimaha Content at FutureLearn, ayaa yidhi: “At FutureLearn, himiladeenu waa inaan bedelno gelitaanka waxbarashada. Mashruucyada midkan ka mid ah waxay muujinayaan sida waxbarashada, danaha gaarka ah iyo nolol maalmeedka ay u wada socdaan gacmaha iyo sida shay kastaaba uu saameyn ugu yeelan karo kan kale. Marka la isku xiro bandhigyada TV-ga ee dadku ay jecel yihiin iyo sababaha loogu soo jiiday koorsooyinka suurtagalka ah iyo dariiqyada shaqada waxay tusinaysaa dadka inay tababari karaan oo ay ka shaqayn karaan aag ay runtii xiiseeyaan."
Dr Kairen Cullen, Dhaqtarka Cilmi-nafsiga ee Diiwaangashan (Waxbarashada), ayaa yiri: "Dhaqanka caanka ah, sida lagu muujiyey bandhigyada TV-ga, ayaa inta badan ka muuqda doorashooyinka waxbarashada ee dhiirigeliya shakhsiyaadka iyo doorashooyinka waxbarashada, kuwaas oo ay sameeyaan. Qaababka daawashada TV-ga maalinlaha ah ee shakhsiyaadka ayaa bixiya aragti faa'iido leh oo ku saabsan fursadaha shaqo ee suurtagalka ah ee iyaga. Heerka ay dookhyadani muujinayaan danaha dadka iyo hawlaha iyo shaqooyinka ay door bidaan way ku kala duwanaan doonaan shakhsiyaadka laakiin waa layli faa'iido leh in lagu iftiimiyo doorashadan madadaalada ee gaarka ah iyo in la isticmaalo waxa aan ogaano marka la tixgeliyo daraasado kala duwan iyo fursadaha shaqo ee mustaqbalka."
Education Technology Dalxiiska
Calzone iyo Pizza: A Dynamic Duo
Emulsion Polymers Market Baaxadda, Saamiyada, Kobaca | Warbixin...